Gabadhii sagaalaad ayaa qabiil iiga tagtay ee somaali ee ma ka quustaa mise waa tallo
SomaliNet Forum (Archive): Ila Tali Walaal - Ask The Experts: Relationships - Shukaansi: Gabadhii sagaalaad ayaa qabiil iiga tagtay ee somaali ee ma ka quustaa mise waa tallo
<!-Post: 225754-!><!-Time: 985240572-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>cabdiraxiim<!-/Name-!> Wednesday, March 21, 2001 - 07:56 pm
<!-Text-!> waxaan ahay wiil aan tol ama qabiil lahayn waxaan nasiib u leeyahay gabdhaha ugu qurux badan soomaalida hadana waa cilad . markaan damco in aan guursado waxaa la i waydiiyaa yuu yahay? ama qabiilkiis I dont know. waxaan deganahay columbus ohio Iam ps information tecno.ma jecli ajnabi waxaan aad ujeclahay gabadh soomaali ah. dantu waxay igu qasbaysaa in aan raadsado pakistaan ama carab soo talo. <!-/Text-!>
<!-/Post: 225754-!> <!-Post: 225847-!><!-Time: 985255255-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Thursday, March 22, 2001 - 12:00 am
<!-Text-!> waxaan ku weydiiyey tol ama qabiil malihi maxaad ka wadaa? mida labaad gabar soomaaliyeed ma weyneysid hadeysan adiga wax kaa qaldaneyne runta soo qor hadii kale meesha nagu kala wad <!-/Text-!>
<!-/Post: 225847-!> <!-Post: 226556-!><!-Time: 985296618-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Sugar<!-/Name-!> Thursday, March 22, 2001 - 11:30 am
<!-Text-!> Warka waa cad yahay!
Tell the truth please. <!-/Text-!>
<!-/Post: 226556-!> <!-Post: 243831-!><!-Time: 986826786-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>C/casiis M. I.<!-/Name-!> Monday, April 09, 2001 - 05:33 am
Walaal si aad ah ayaan uga xumey arinta aad sheegeysid hadey kugu dhacday.
Waxaan kugula talin laa hadii aad dooneyso inaad guursato;
-inaad marka ugu horeysa ee aad la kulanto wehelkii naftaada (gabar aad si aad ah uga heshid oo aad jeclaatid inaad nolosha la qeybsato) u sheeg qofka aad tahay, waxaad jeceshay iyo waxaad necebtay.
-intaadan guur ku soo qaadin isku dey inaad ogaato gabadha shaqsiyadeeda iyo habka ehelkeedu u dhaqmaan.
-isku day inaad ogaato in gabadhu ku jeceshay iyo inay kugu daneysaneyso.
Runtu aad bey kuu caawisaa.
Ha ku nicin dadkaaaga guur kaa xumaadey. Sidaad sheegtayna hablaha soomaaliyeed waa xurux iyo raxmad badan yihiin, balse waxaa jira waalidiin aan garaneyn waxa waalidnimadu tahay.
Nasiib wanaagsan ayaan kuu rejeynayaa. <!-/Text-!>
<!-/Post: 243831-!> <!-Post: 244128-!><!-Time: 986848905-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>idil<!-/Name-!> Monday, April 09, 2001 - 11:41 am
<!-Text-!> salaama ka dib markaan ku weydiiyo maxey tahey tol la,aanta ku heysa.....yaadse tahey?mida kale hadii personality gaagu sareeyo i don´t think in qabiil lagugu nacayo ee runta ka hadal <!-/Text-!>
<!-/Post: 244128-!> <!-Post: 244868-!><!-Time: 986910446-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Somali-boy<!-/Name-!> Tuesday, April 10, 2001 - 04:47 am
<!-Text-!> Cabdiraxim, fili maayo in gabadh Somaliyeed kaaga tegayso qabiil la'aan inkastoo aanan fahmin waxay tahay qabiil la'aan. Haddaad meel kale ka waydo tag masaajidada waxaad helaysaa gabadh Illaah dhawray oo ninimadaad kugu rabta oo aan qabiil kala jeclayn hadda waa markaad adigu muslimnimo muujisid oo aad daacad ka tahay.
Allah ha kuu sahlo.
<!-/Post: 244868-!> <!-Post: 246755-!><!-Time: 987075562-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>sanka<!-/Name-!> Thursday, April 12, 2001 - 02:39 am
walaal anigu waxaan kugula talinayaa hadaad tahay nin diintiisa yaqaan iska ilow QABIILKA oo ilaahay bari si aad ula gulunto inan sidaada oo kale ah
tan xigta ajnabiga haday muslin yihiin yaa kuu diidaya sxb guurso <!-/Text-!>
<!-/Post: 246755-!> <!-End-!>